#INNPI (Zomi): BV Articles
Showing posts with label BV Articles. Show all posts
ဘုရားကို လှောင်ပြောင်၊အာခံ၊သရော်ပြီး မထီမဲ.မြင်ပြုသူများ၏နိဂုံး
ဘုရားကို လှောင်ပြောင်၊အာခံ၊သရော်ပြီး မထီမဲ.မြင်ပြုသူများ၏နိဂုံး-!!
*ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်-John Lennon(Singer-1966): ဒီအချိန်မှာဘုရားထက် ငါတို.နာမယ်ကြီးသွားပြီ“today we are more famous than Him”ဟု ပြောပြီး မကြာခင်သူတို.အဖွဲကွဲကာ သူလည်း ကွယ်လွန်သွားပါသည်။
*သမ္မတTancredo Neves( Brazil )၊အကယ်၍ မဲ ၅သိန်းရပါက ဘုရားကတောင် ငါ.ကို မဖယ်ရှား နိုင်တော.ဘူးဟုပြောပြီး အမှန်မဲရ၍သမ္မတဖြစ်လာသော်လဲ၊ ရာထူး လက်ခံရန် တစ်ရက်အလို သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
*Marilyn Monroe (ကမ္ဘာကျော်မင်းသမီး)၊ Dr.BillyGrahamအား၊သူမကိုဧဝံဂေလိ တရားဝေငှရန် ဖေါ်ပြသော်လဲ သင်.ဘုရားကို ကျမအလိုမရှိဘူး'I don't need your Jesus'.ဟု ငြင်းပယ်ပြီး တပတ်အကြာ၊သူ.တိုက်ခန်းတွင် သူ.အလောင်းကိုတွေ.ခဲ.သည်။ယနေ.ထိ ဘယ်သူသတ်တယ် တိုတာ အတိကျမသိရပေ။
*Cazuza (singer)၊သီချင်းဆိုအပြီး သူသောက်သောဆေးလိပ်တိုအား လေထဲပစ်၍ (ရော.-ဘုရားသခင် ခင်ဗျားသောက်ဖို.)ဟု ပျက်ရယ်ပြုခဲ.ရာ မကြာခင်၊သူ.အသက်၊၃၂နှစ် ကင်ဆာရောဂါဖြင်. သေဆုံးသွားသည်။
*Titanic-သင်္ဘောကြီးအား၊ဘုရားသခင်ပင်လျှင် မဖျက်စီးနိုင်ဘူး 'Not even
God can sink it' ဟု ဘုရားကို ကဲ.ရဲ.ခြင်းကြောင်. ရေထဲနစ်မြုပ်ခဲ.လေသည်။
*Campinas(2005)ဆိုသည်.မိန်းခလေးနှင်.သူငယ်ချင်းများ၊ကားဖြင်.အပြင်သွားရန် သူ.အမေဖြစ်သူက(သမီးတို.နဲ.အတူ ဘုရားသခင်ပါရှိပါစေ)ဟုနုတ်ဆက်ရာ-သူ.သမီးမှ-"ကားထဲမှာထိုင်စရာ နေရာမရှိတော.ဘူး၊ဘုရားသခင်က ပစ္စည်းထဲ.တဲ.နေရာမှာပဲလိုက်လာပါစေ”ဟု သရော်ကာပြောခဲ.အပြီးတနာရီအကြာတွင် ကားတိုက်
မှု ဖြစ်၍ အားလုံးသေဆုံးသွားသည်။မှုခင်းရဲ၏အဆိုအရပစ္စည်းထဲ.စရာအခန်းရှိ စားစရာများ ပျက်စီးခြင်းမရှိ၊ ကြက်ဥတလုံးတောင်မကွဲကြောင်းသိရသည်။
(မြောက်များစွာသောသက်သေထဲမှ သင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို. အနည်းငယ်သာ
**ဂလာတိ၊၆း၇ အလွဲမယူကြနှင့်။ ဘုရားသခင်သည် မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကို ခံတော်မမူ။လူသည်မျိုးစေ့ကြဲသည်အတိုင်းအသီးအနှံကို ရိတ်ရလိမ့်မည်**
သို့သော် ကျေးဇူးတော်ကို ယုံကြည်လက်ခံကာ နှုတ်နဲ့ဝန်ခံသောသူ အတွက် အပြစ်မှလွတ်ခြင်း၊ အဆိုးမှ ကယ်နုတ်ခြင်းကို ရ၏။
"Valentine's Day" ချစ်သူများနေ့ ဘယ်ကစခဲ့တာလဲ
(ဓါတ်ပုံ-ရဟန္တာစိန်ဗလက်တိုင်း ၏ ပုံတော်)
(ကက်သလစ်သာသနာ၏ ရဟန္တာမြတ်များ blog မှပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြသည်။)
စိန်ဗလက်တိုင်းသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်း၊ စေ့စပ်ကြောင်းလှမ်းခြင်း၊ နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ လူငယ်များ၊ ခရီး သွားများ၊ ပျားမွေးမြူသူများနှင့် ဦးနှောက်ထိခိုက်၍ ဝေဒနာခံစားနေရသူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက ပေးနေသည့် ရဟန္တာတစ်ပါးပင် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် သူ့အား ချစ်သူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူအဖြစ် လူသိများပြီး သူ၏ပွဲနေ့အား ဗလက်တိုင်းနေ့ (ချစ်သူများနေ့)ဟုပင် သတ်မှတ် ကျင်းပလာကြသည့်ဓလေ့မှာ နှစ်ပေါင်း ၆၀၀ ခန့်ရှိနေပါပြီ။
ဗလက်တိုင်းသည် ကက်သလစ် ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ တတိယရာစုအတွင်း အီတလီတွင်နေထိုင် အသက်ရှင်ခဲ့ပြီး ရောမမြို့တွင် ရဟန်းတစ်ပါးအဖြစ် အစေခံ ခဲ့လေသည်။ သူ၏ငယ်စဉ်ဘ၀ကို သမိုင်းပညာရှင်တို့မသိကြပေ။ ကက်သလစ်ရဟန်းတစ်ပါးအဖြစ် အစေခံနေသည့် အချိန်မှစ၍ သူ့အကြောင်းအား သိခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်က ရောမမြို့အား အင်ပါယာမင်း ကလောဒီရုစ် (၂)အုပ်ချုပ်နေပြီး သူ၏တပ်မတော်အတွက် လူငယ်များစွာကို စစ်သားအဖြစ်လိုအပ်နေသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းသည် စစ်သားအင်အား စုစောင်းရန် အတားအစီး တစ်ခုဟု ယူဆ၍ လက်ထပ်ခြင်းကို တရားဝင်ခွင့်မပြုပေ။ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော စစ်သားများကိုပင် လက်ထပ်ခွင့် ပြုရန် ခေါင်းမာသည်။ ထိုကြောင့် လူငယ်များစွာအား အချစ်ရေးထက် စစ်ဘက်၌ အာရုံစိုက်စေဖို့ ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီးများအား လက်ထပ်ခြင်း စက္ကရမင်တူးမပေးရန် တားမြစ် ခဲ့လေသည်။
ထိုအချိန်မှာပင် ချစ်သူစုံတွဲများ ပေါင်းဖက်နိုင်ဖို့အရေးကို စွမ်းဆောင်ပေးသူမှာ ဗလက်တိုင်းဟုခေါ်သော ဘုန်းတော်ကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်ကြိုက်နေကြသော စုံတွဲများအား လက်ထပ်ပေးရင်း ဗလက်တိုင်းဟာ လက်ထပ်ပေးသည့် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် နာမည်ကြီးလာခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို ကြားသိရသော အင်ပါယာမင်းသည်လည်း အမျက်ဒေါသထွက်၍ သူ့အားထာင်ဒဏ် အပြစ် ပေးပြီး ထောင်ချ ထားခဲ့လေသည်။ သို့သော် ဗလက်တိုင်းသည် ထောင်ထဲ၌ ရှိနေသော်လည်း အပြင်၌လူငယ်များစွာအား လက်ထပ်ပေးနေဆဲဖြစ်ပေသည်။ ထောင်ထဲ၌လည်း ထောင်သားများနှင့် ရင်းနှီးကာ သြစတဲရီးရုစ်ဟု ခေါ်သော ထောင်သားက သူ၏ သမီးငယ်အတွက် အကူအညီတောင်းခံခဲ့လေသည်။ သူ၏သမီးငယ်မှာ ဂျူလီယာဖြစ်ပြီး မျက်စိအလင်း ကွယ်ပျောက်နေသူပင် ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် ထောင်ထဲသို့ဖခင်အား လာတွေ့ရာမှ စိန်ဗလက်တိုင်းနှင့် ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့သည်။
အင်ပါယာမင်း ကလော့ဒီရုစ် (၂)လည်း ဗလက်တိုင်း၏အစွမ်းကို သဘောကျလာကာ သူ့၏ အမှားအတွက်ပင် တောင်းပန်ခဲ့လေသည်။ သို့သော်လည်း ခရစ်ယာန် ဘာသာကိုစွန့်၍ ရောမဘုရားများကို ကိုးကွယ်မှ သာလျှင် ထောင်မှ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့လေသည်။ ဗလက်တိုင်းသည် သူ၏ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းအား မစွန့်လွတ်နိုင်ကြောင်း၊ အင်ပါယာမင်းကိုလည်း ခရစ်တော်၌သာ ယုံကြည်သင့်ကြောင်း တရားဟောခဲ့လေသည်။ သို့သော်လည်း ရောမအင်ပါယာမင်းအတွက် ရောမဘုရားကို မကိုးကွယ်လျှင် အင်ပါယာပျက်မည့် အရေးကြောင့် လက်မခံခဲ့ပေ။ ဗလက်တိုင်းကိုလည်း ရောမဘုရားတို့၏ ပရော်ဖက် ဖြစ်စေချင်လွန်း၍ သိမ်းသွင်းရာမှ နောက်ဆုံး ခေါင်းဖြတ်ကွပ်မျက်ခဲ့ရသည်အထိ ဖြစ်ပျက်ခဲ့လေသည်။ အေဒီ၂၇၀၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၄)ရက်နေ့ တွင် ဗလက်တိုင်း ပျံလွန် တော်မူ ခဲ့လေတော့သည်။
နှလုံးသားပုံ ရိ(ဒ်) ရေကန် (သို့မဟုတ်) ချင်းတောင်တန်းပေါ်က အံ့ဖွယ် အလှတရား
(ဆောင်းပါး / ဧရာဝတီ)
ရိ(ဒ်) ရေကန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်မက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ရေကန်တွေအနက် အသည်းနှလုံး ပုံသဏ္ဌာန်နဲ့ အတူဆုံး ရေကန်ရယ်လို့ မှတ်တမ်းတွေမှာ ဖော်ပြကြတာကိုလည်း ဖတ်ရှုဖူးပါတယ်။ ရေကန်ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာက ထူးခြားဆန်းပြားနေသလို သူ့ကို ပံ့ပိုးနေကြတဲ့ အလှတရားတွေကလည်း အခိုင်အမာကို တည်ရှိနေတာပါ။
အသည်းပုံ ရိ(ဒ်) ရေကန်ရဲ့ ဘေးပတ်လည်မှာ စည်းရိုးပုံသဏ္ဌာန် ရစ်ဝိုင်းပေါက်နေတဲ့ မိုးမခပင်တွေရဲ့ အလှတရား ကလည်း ထူးခြားနေသလို အဲဒီ မိုးမခပင်တွေဟာ ရိ(ဒ်) ရေကန်ရဲ့ အလှတရား ပျက်မသွား အောင် ကာကွယ်ဖို့ သစ္စာခံပြီး ဝန်းရံပေါက်နေ သလားလို့တောင် ထင်စရာပါ။
ရိ(ဒ်)ရေကန်ကို အပေါ်စီးကနေ ကြည့်လိုက်ရင် ဘေးပတ်လည်မှာ ရစ်ဝိုင်းပေါက်နေတဲ့ မိုးမခပင်တွေဟာ သေသပ် လှပတဲ့ အနားကွပ်တခုနဲ့ တူနေပြီး ရေကန်ကြီးရဲ့ အသည်းနှလုံးပုံ အလှတရားကို တိုက်စားပျက်စီး မသွားအောင် ထိန်းသိမ်း ပေးနေတဲ့ စည်းရိုးနဲ့လည်း တူနေပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ မိုးမခပင်တွေကို ဒေသခံတွေ ကတော့ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုအရ “ဝိညာဉ်ခြံစည်းရိုး” လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြ ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေး၊ မိုးမခပင်တွေရဲ့ အကိုင်းတွေပေါ်မှာ ဆိုရင်လည်း ဖူးပွင့်ဝေဆာနေတဲ့ ရောင်စုံသစ်ခွပန်းတွေ၊ ရေကန်စပ်မှာ ပေါက်နေတဲ့ အညိုရောင် ဗေဒါပန်းတွေ၊ ကြာဖြူ ကြာနီတွေ ဖူးပွင့် နေကြပုံဟာလည်း ရိ(ဒ်) ရေကန်ရဲ့ အလှတရားကို ပံ့ပိုးနေကြတယ် လို့ ထင်မှတ်ရပါတယ်။
ရိ(ဒ်) ရေကန်ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေထဲမှာ ဒီရေကန်ထဲက ရေဟာ တနှစ်တခါ နောက်လေ့ ရှိပြီး ရေနောက် ချိန် ဟာ တပတ်လောက် ကြာတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ချမ်းအေးလွန်းတဲ့ ခရစ္စမတ်ကာလမှာ ဖြစ်ပြီး မိုးလည်းမရွာ၊ ချောင်းရေ၊ မြောင်းရေလည်း စီးမဝင် ဘဲ အလိုလျောက် နောက်ကျိတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ရိ(ဒ်) ရေကန်ကို လာလည်ကြသူတိုင်းဟာ ပြန်တဲ့အချိန်မှာ ကန်ထဲကရေကို ရေဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် ပုလင်းတွေနဲ့ ခပ်ယူ သယ်ဆောင် သွားကြပါတယ်။ ခပ်ယူသွားတဲ့ ရေဟာ နယ်ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ရိ(ဒ်) ရေကန်ထဲက ရေတွေ နောက်တဲ့ အချိန်မှာ သယ်ယူသွားတဲ့ ရေဟာလည်း တပြိုင်တည်း နောက်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုတေသန ပြုလုပ်ထားမှုတွေ မရှိသေးပေမယ့် ခေတ်ပညာတတ် တချို့ကတော့ ရေကန် ရဲ့ အောက်မှာ အပူဓာတ်ရှိတဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ် တချို့ ရှိနိုင်ပြီး အအေးလွန်တဲ့ ကာလမှာ အနွေးဓာတ် ရှိနေတဲ့ အောက်ရေပြင်က အအေးဓာတ်ရှိနေတဲ့ အပေါ်ရေပြင်ကို ချော်ရည်၊ ရွှံ့မြေတွေနဲ့ ရောနှော တိုးထွက်လာ တဲ့ ရေသံသရာလည်ခြင်း Water Circulation မျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ် ပြောဆိုနေကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ရိ(ဒ်) ရေကန်ဟာ အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလန်းခရိုင် ရိခေါဒါရ် မြို့လေးနဲ့ နှစ်မိုင်လောက် အကွာက တောင်တန်းတွေ ပေါ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရဲ့ နယ်စပ်မျဉ်းနဲ့လည်း ၂ မိုင်လောက်သာ ကွာဝေးပါ တယ်။ ရေကန်ရဲ့ အရှေ့ဘက်ထိပ်ကနေ အနောက် ဘက်ကို လှမ်းမျှော် ကြည့် လိုက်ရင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် ထဲက အဆောက်အအုံတွေကို တွေ့မြင် နေရပါတယ်။
ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင် အထက် ပေ ၁၉၀ဝ ကျော်မှာ တည်ရှိပြီး ရေကန်ရဲ့ ပတ်လည် အကျယ်အဝန်း ကတော့ ၂ ဒသမ ၅ မိုင် ရှိတယ် လို့ သိရပါ တယ်။ ရေရဲ့ အနက်ကတော့ ပျမ်းမျှ ပေ ၅၀ ရှိပြီး အနက် ဆုံးနေရာကတော့ ပေ ၆၀ ထိ ရှိလိမ့်မယ် လို့ ပညာရှင်တွေရဲ့ တိုင်းထွာထားချက်တွေ အရ သိရပါတယ်။
ရေကန်ရဲ့ မြောက်ဘက်က တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ရိ(ဒ်) ကျေးရွာလေး ရှိပြီး ဒီရွာသားတွေဟာ ရိ(ဒ်) ရေကန် ကြီးကို အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားကြသလို ကန်ကြီးအနီးမှာ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘဝကို ဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ယုံကြည်မှုအရ ရိ(ဒ်) ရေကန်ဟာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ နောက်တခုက ရိ(ဒ်) ရေကန်ရှိလို့ ကျနော်တို့ ရိ(ဒ်) ရွာကို လူပိုသိလာတာ။ ရိ(ဒ်)ရေကန်သာ မရှိရင် တောင်ကြားထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကျနော်တို့ရွာ လေးကို ဘယ်သူမှ တောင် အသိအမှတ် ပြုကြမှာ မဟုတ်ဘူး” လို့ ရိ(ဒ်) ရွာသား မီဇိုးတဦးက ပြောပါတယ်။
ရိ(ဒ်) ကျေးရွာနဲ့ ရိခေါဒါရ်မြို့လေးမှာ နေထိုင် သူ အများစုကတော့ ချင်းမျိုးနွယ်စုဝင်တွေ ဖြစ်တဲ့ မီဇိုး တိုင်းရင်းသား တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ရိ(ဒ်) ရေကန်ဟာ ဒေသခံ မီဇိုး တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက်တော့ ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ ဇာတ်လမ်း တွေ၊ ယုံကြည်စွဲလမ်းမှု တွေနဲ့အတူ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားရတဲ့ အမှတ်သင်္ကေတ တခုအဖြစ် ရှိနေဆဲပါ။
ဒဏ္ဍာရီ ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ စွဲထင်နေတဲ့ ရိ(ဒ်) ရေကန်ကြီးကို ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေက ချင်း ပြည်နယ်ရဲ့ နှလုံးသား၊ မီဇိုး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဝိညာဉ်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ် ကြပါတယ်။ သူတို့ အကြားမှာတော့ ဒီရေကန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တချို့ကလည်း ရိ(ဒ်) နတ်မင်းကြီး စံစားရာ နတ်ဘုရားရေအိုင်၊ တချို့ကလည်း နတ်သမီးရေကန်၊ တချို့ကလည်း သစ္စာရေကန် စသဖြင့် ယုံကြည်စွဲလမ်းမှု အမျိုးမျိုးရှိ ကြပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ အများဆုံး ပြောဆိုနေကြတာက တော့ မီဇိုးတယောက် သေဆုံးသွားတဲ့အခါ သေဆုံး သူရဲ့ ဝိညာဉ်ဟာ ဘဝတပါးကို နောက်ဆံတင်းမှု ကင်းစွာနဲ့ ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက် ရိ(ဒ်) ရေကန်ကို လာရပြီး အတိတ်ဘဝမေ့ စမ်းရေကြည်ကို သောက်ကာ နောက်မလှည့်ပန်းကို ပန်ကြရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအခါမှာ သေဆုံးသူရဲ့ ဝိညာဉ်ဟာ အတိတ်ဘဝကို တမ်းတစိတ်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ဘဝသစ်ကို ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့ အတွက် ရိ(ဒ်) ရေကန် အတွင်းကို နောက်ဆံတင်းမှုကင်းစွာ ဆင်းသွားကြတယ် လို့ ယုံကြည်မှုတွေ ရှိနေကြတာပါ။
ဒီ ယုံကြည်မှု အရ မီဇိုးလူမျိုးတွေဟာ နှစ်စဉ် ရက်လည်၊ နှစ်လည် နာရေး အခမ်းအနားတွေကို ဒီ ရိ(ဒ်) ရေကန်ကြီးမှာ လာရောက်ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
မီဇိုးမျိုးနွယ်စုတွေ ကြားမှာ ဒီလိုယုံကြည်မှုတွေဟာ ဒီနေ့ချိန်ထိ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး မီဇိုးသီချင်းတွေ၊ ကဗျာတွေ ထဲမှာ “သေဆုံးတယ်” ဆိုတဲ့ စကားအစား “ရိ(ဒ်) ရေကန်သွားတယ်”၊ “မိမတိုင်၊ ဖမတိုင်ဘဲ ရိ(ဒ်) ရေကန်ကို သွားရသလား”၊ “ရိ(ဒ်) ရေကန်သွားဖို့ ဘယ်သူ ခွင့်ပြုလိုက်သလဲ” စသဖြင့် အလွမ်းတေး တွေ၊ ကဗျာတွေ ရေးဖွဲ့သီဆို နေကြဆဲ ဖြစ်တယ် လို့ “ရိ(ဒ်)ရေကန်အကြောင်း သိကောင်းစရာ” စာအုပ်ထဲမှာ ကျောင်းဆရာ ဦးငှားကာက ဖော်ပြထားတာ ကိုလည်း ဖတ်ရှုရပါတယ်။
အဲဒီမှာရှိတဲ့ ဒေသခံတချို့ ကလည်း ဒီကန်ထဲမှာ နဂါးတွေ ကိန်းဝပ်တယ်လို့ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ ရိ(ဒ်) ရေကန်ရဲ့ အရှေ့ဘက် ထိပ်ပေါ်မှာ အစိုးရစစ်တပ်ရဲ့ ကင်းစောင့်တပ်သားတချို့ ရှိပြီး တခါတရံမှာ ရေကန် အတွင်း ၁၅ ပေ လောက် အရှည်ရှိတဲ့ ရှည်မျောမျော သတ္တဝါနှစ်ကောင်ကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရိ(ဒ်) ရေကန်အနီးမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ရိ(ဒ်) ကန်သာ စားသောက်ဆိုင် မန်နေဂျာ ဦးဒိန်းငါက “ဟုတ်တယ်။ ရဲဘော်တွေ ခေါ်ပြလို့ ကျနော်တို့ သွားကြည့်တယ်။ ၁၅ ပေလောက် ရှည်တဲ့ဟာ နှစ်ခု ရေထဲမှာ သွားနေတာ တွေ့တယ်။ သူတို့ ကတော့ နဂါးလို့ ထင်နေကြတယ်။ ကျနော် စဉ်းစားမိတာက ဒီကန်ထဲမှာ နှစ်ချို့ငါးတွေလည်း ရှိတော့ ငါးတွေ အုပ်လိုက် တန်းစီပြီး သွားနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ” လို့ သူ့အမြင်ကို ရှင်းပြလိုက်ပါသေးတယ်။
ရိ(ဒ်) ရေကန်ကြီး အနီးမှာ ရိ(ဒ်)ကန်သာ စားသောက်ဆိုင် ရှိပြီး ညအိပ်ဖို့အတွက် နှစ်ခန်းတွဲ ဘန်ဂလိုလေး တွေ ရှိပါတယ်။ သစ်သားနဲ့ ပြုလုပ် ထားပြီး ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ နှစ်ယောက် အိပ်ခန်း တခန်းကို တည ကျပ် ၁ သောင်း ပေးရပြီး ဝင်ချိန်ကနေ ၂၄ နာရီ အထိ နေခွင့်ပေးပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ အတွက်က တော့ နှစ်ယောက် အိပ်ခန်း တခန်းကို ကျပ် ၂ သောင်း ယူပါတယ်။
ဒေသခံတွေရဲ့ အယူအစွဲတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲလို့ ရှိနေတဲ့ ရိ(ဒ်) ရေကန်ကြီးဟာ ခရစ္စမတ် ကာလရဲ့ နံနက်ခင်းဆို ရင်တော့ ၈ နာရီ လောက်ထိ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရပါဘူး။ ကန်ရေပြင် အနီးသွားပြီး ကပ်ကြည့်ရင်တောင် ကန် ထဲကို ဝါဂွမ်းထုပ်ကြီး ပုံထည့် ထားသလို မြူနှင်းတွေ ဖုံးလွှမ်းလို့ နေပါတယ်။
အဲဒီ အချိန်ဆို မြူနှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ ကန်ကြီးထဲမှာ လှေငယ်လေးတွေနဲ့ ငါးဖမ်းနေတဲ့ တံငါသည် တချို့တော့ ရှိပါတယ်။ သူတို့လည်း ဒီကန်ကြီးကို အမှီပြုပြီး တံငါလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးကြရတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ကန်ထဲမှာတော့ ငါးခုံးမ၊ ငါးမြွေထိုး၊ ရွှေဝါငါးကြင်းနဲ့ မြက်စားငါးကြင်းတွေ ရှိတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
နေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ ညနေခင်းတွေ ဆိုရင် ရိ(ဒ်) ရေကန် အတွင်းမှာ စက်လှေနဲ့ လှည့်ပတ်လေ့လာ သူတွေ၊ ရေချိုးသူတွေနဲ့ ကန်ပေါင်ပေါ်မှာ ဆိုရင် ချစ်သူစုံတွဲတွေ၊ မိသားစုလိုက် အပန်းဖြေခရီး ထွက်လာသူတွေနဲ့ စည်ကားပါတယ်။
လာရောက် လည်ပတ်သူတွေ တရက်ကို ပျမ်းမျှ အယောက် ၂၀၀ လောက်ရှိပြီး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက တော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ် ပြည်နယ်ထဲက မီဇိုးလူမျိုးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီရေကန်ကို လာရောက် လည်ပတ်ဖို့ ကလည်း မီဇိုးလူမျိုးတို့ အတွက် အိပ်မက်တခု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မီဇိုရမ်က လာတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ၊ ချစ်သူစုံတွဲတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ သူငယ်ချင်း အဖွဲ့ လိုက်တွေ ကားနဲ့ တမျိုး ဆိုင်ကယ်နဲ့ တဖုံ အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် တီအို (Tiau) ချောင်းကို ဖြတ်ဖောက်ထားတဲ့ နယ်စပ်ချစ်ကြည်ရေး တံတားကနေ ရိခေါ ဒါရ် မြို့လေးက တဆင့် လာရောက်လည်ပတ် ကြတာပါ။
ရိ(ဒ်) ရေကန်ကို လာရောက် လည်ပတ်ကြတဲ့ မီဇိုးလူမျိုးတွေဟာ နံနက်ခင်း ချင်းတောင်တန်းတွေ ဆီက နေလုံး စတင် မထွက်ခင် အချိန်ကစလို့ ရေကန် အနောက်ဘက် မီဇိုရမ်တောင်တန်းရဲ့ နောက် နေလုံးကြီး ဝင်သွားချိန်အထိ ပြတ်တယ် ရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ တချို့ကတော့ မီဇိုရန် တောင်တန်းကြီးပေါ်က နေဝင်သွားတဲ့ အရသာကို စောင့်ကြည့် ကြပါတယ်။
ရိ(ဒ်) ရေကန် အကြောင်းကို မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရဲ့ ကျောင်းစာ သမိုင်းဘာသာရပ်မှာတောင် ပြဋ္ဌာန်း ထားပြီး အဲဒီအထဲမှာ “မီဇိုရမ် ပြည်နယ်မှာ မီဇိုးလူမျိုး တွေရဲ့ ထင်ရှားလှတဲ့ အကြီးဆုံး ရေကန်ကြီး တခုရှိပြီး အဲဒီ ရေကန်ဟာ လက်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်းက ရိ(ဒ်) ရေကန်ဖြစ်တယ်” လို့ ပါရှိကြောင်း ရေကန်ကို ကျောင်း သားတွေ လိုက်ပို့တဲ့ အလယ်တန်းပြ မီဇိုးကျောင်းဆရာမ တဦးက ရှင်းပြပါတယ်။
မီဇိုးလူမျိုးတို့က သူတို့ရဲ့ မိသားစု ဆွေမျိုး သားချင်းတွေနဲ့ ဘိုးဘွားတွေ သေဆုံးတဲ့အခါ ဝိညာဉ်တွေ တထောက် ခိုနားရာ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည် ထားကြတဲ့ အတွက် ဒီ ရိ(ဒ်) ရေကန်ကြီးကို တန်ဖိုး ထားကြ သလို အိမ်ပြန်တဲ့ အခါမှာလည်း ရိ(ဒ်) ရေကန်ထဲက ရေကို ရေညှိပင်လေးတွေနဲ့ ရောပြီး ရေဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် ပုလင်းနဲ့ ထည့်ယူ သယ်ဆောင် သွားကြပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ် ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ မီဇိုး လူမျိုးတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ချင်းပြည်နယ်မှာ ရှိနေတဲ့ မီဇိုးလူမျိုး တွေဟာ မျိုးနွယ်စုဝင် တခုတည်း ဖြစ်ကြ ပြီး စကားလည်း တူကြပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ် ခွဲတဲ့ အခါမှာ ကွဲသွားကြပေမယ့် ရိ(ဒ်) ရေကန် အပေါ်မှာ ထားတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကတော့ အတူတူပဲ ဖြစ်ကြတယ် လို့ ဆိုကြပါတယ်။
မီဇိုရမ် ပြည်နယ်ထဲက မီဇိုးလူမျိုးတွေ အတွက် ကတော့ နီးစပ်မှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင် ပြေမှု တွေကြောင့် အပန်းဖြေ ခရီး၊ လေ့လာရေး၊ ပျော်ပွဲစားခရီးတွေ အဖြစ် လာရောက် လည်ပတ်ကြလို့ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပေမယ့် မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ သွားရောက် လည်ပတ်နိုင်ဖို့ကတော့ အလှမ်းကွာနေဆဲ ဖြစ်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကလည်း ခက်ခဲတာကြောင့် လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ခက်ခဲနေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
နောက်တခုက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ နယ်စပ် ရိခေါဒါရ် မြို့လေးနားကို ရောက်တာနဲ့ မြန်မာ ဖုန်းလိုင်းတွေက မမိတော့ပါဘူး။ ဒေသခံတွေ ကတော့ အိန္ဒိယ ဖုန်းလိုင်းတွေကိုပဲ သုံးကြပါတယ်။ ရိခေါဒါရ် မြို့လေးပေါ်က မြို့ခံတွေ ကလည်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံကလာတဲ့ ဖုန်း၊ အင်တာနက်နဲ့ ရုပ်သံလိုင်းတွေကို သုံးစွဲကြသူ အများစုပါ။ ငွေကတော့ မြန်မာ ငွေရော ရူပီးရော နှစ်မျိုးလုံး သုံးလို့ရပါတယ်။
ပြည်တွင်းကနေ သွားရောက် လည်ပတ်လိုသူတွေ အတွက်တော့ ရိ(ဒ်) ရေကန်နဲ့ အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ ရိခေါဒါရ် မြို့လေးကို လာဖို့ အတွက် အနီးဆုံးက တီးတိန်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလမ်းကြောင်း ကလည်း အခုအချိန်ထိ ကတ္တရာလမ်း မရှိဘဲ ကျောက်ခင်းလမ်းတွေပဲ ဖြစ်နေပြီး မတ်စောက်တဲ့ တောင်ကမ်းပါးယံ တွေကို ဖြတ်ဖောက်ထားတဲ့ တောင်ပေါ်လမ်းက ကြမ်းလွန်းတာကြောင့် ခရီးသည်တွေမှာ နို့ဆီခွက်ထဲ ခဲထည့်ခေါက်ခံရတဲ့အဖြစ် မျိုးပါ။
သာယာလှပတဲ့ ချင်းတောင်တန်းကြီးတွေ ပေါ်မှာ အကျည်းတန်တဲ့ အရာကို ပြပါဆိုရင် အဲဒီလမ်းကို အရင်ဆုံး ပြေးမြင် မိကြပါလိမ့်မယ်။ မိုးရာသီဆို ဗွက်နစ်နေလို့ လမ်းပိတ်တာ၊ နွေနဲ့ ဆောင်းမှာဆို ဖုန်တလုံးလုံးနဲ့ ကြုံရတဲ့ဒဏ်တွေကို ဒေသခံ ခရီးသွားတွေ အခံရဆုံး ဖြစ်မှာပါ။
ချင်းတောင်တန်းကြီး တွေပေါ်က လမ်းတွေ ဘယ်လိုပဲ ကြမ်းတမ်း အကျည်းတန် နေပေမယ့် စိမ်းညို့ညို့ချင်းတောင် တန်းကြီးတွေ၊ ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ယုံကြည် စွဲလမ်းမှု အငွေ့အသက်တွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ အသည်းနှလုံး ရိ(ဒ်) ရေကန်ကြီး ကတော့ အလှမပျက် တည်ရှိနေဦးမှာပါ။ ။
ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်ရဲ. စာကြည့်တိုက် နံရံပေါ်က အချက်၂၀ ဆုံးမစာ
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ. စာကြည့်တိုက်နံရံပေါ်က အချက်၂၀ ဆုံးမစာ…